पन्ध्र दिनसम्म १३ विन्दुमाथि रहेको नेप्से मंगलवार १२८९.२८ विन्दुमा, १३ सय विन्दुको परीक्षण गर्दै | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण पन्ध्र दिनसम्म १३ विन्दुमाथि रहेको नेप्से मंगलवार १२८९.२८ विन्दुमा, १३ सय विन्दुको परीक्षण गर्दै
जेठ २१, काठमाडौं (अस) । मंगलवारको कारोबारमा नेप्से परिसूचक ३ दशमलव ५६ अंकले घटेर १ हजार २८९ दशमलव २८ विन्दुमा पुगेको छ । १५ दिन १ हजार ३ सय विन्दुमा कारोबार भएको नेप्से सोमवारदेखि १३ सय विन्दु तल आएको छ । बजेटपछि बजार बढ्ने अनुमा गरेका लगानीकर्ताहरु हाल बजार घट्दा कुनै कारण नभएको बताउँछन् । बजेटपछि नेप्से मंगलवारसम्म २४ दशमलव ६० अंकले घटेको छ ।
वैशाख ३० गतेदेखि जेठ १९ गतेसम्म लगातार १ हजार ३ सय विन्दुमाथि कारोबार भइरहेको नेप्से जेठ २० गतेदेखि सो विन्दुभन्दा तल आएको छ । नेप्सेले लामो समय १३ विन्दुको मनोबैज्ञानिक परीक्षण गरिरहँदा १ हजार ३४९ विन्दुसम्म पुगिसकेको थियो । तर नेप्से अन्त्यमा बन्द हुने समयमा भने १ हजार ३ सय १९ विन्दुभन्दा माथि जान सकेको छैन ।
मंगलवार १ हजार २९२ दशमलव ८६ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक १ हजार २९७ दशमलव ७१ विन्दुसम्म पुगेको थियो । तर नेप्सेले १३ सय विन्दुमा भने टेक्न सकेन । यस दिन बजारमा खरीद गर्ने र विक्री गर्नेको चाप उच्च रहेको थियो । सोही कारण कारोबार रकम रू. ७१ करोड माथि पुग्न सकेको हो ।
कारोबार अवधिभर १२ समूहको परिसूचकमा होटल, विकास, वित्त र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक बढेको छ भने बाकी समूहको परिसूचक घट्दा समग्र नेप्से परिसूचक शुन्य दशमलव २८ प्रतिशतले घट्न पुगेको छ ।
यस दिन रू. ७१ करोड ५४ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस दिनको कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा २ दशमलव ४० प्रतिशत बढेको हो । सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन शून्य दशमलव ६२ अंक घटेर २७४ दशमलव ८६ विन्दुमा बन्द भएको छ । कारोबार भएका १७२ कम्पनीमा ४९ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ९८ कम्पनीको घटेको छ । साथै, २५ कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ ।
तारागाउँ रिजेन्सिको बुक क्लोज नजिकिदै गर्दा बढ्यो मूल्य
तारागाउँ रिजेन्सि होटलको शेयर मूल्य करीब ७ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. २१ ले बढेर रू. ३२२ पुगेको छ । कम्पनीको जेठ २४ गते साधारण सभा हुन गइरहेको छ । सोको लागि कम्पनीले जेठ २४ गतेसम्म बुक क्लोज तोकेको छ । तर कम्पनीको शेयर जेठ २३ गतेसम्म कायम भएकाले सभामा भाग लिन पाउनेछन् । कम्पनीले दिने लाभांश सुरक्षित गर्नको लागि मंगलवार माग बढेको हो । दोस्रोमा भर्खरै नेप्सेमा आईपीओ सूचिकृत भएको गुराँस लघुवित्तको शेयर मूल्य ६ दशमलव ८५ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता रू. ३१२ पुगेको छ । जोशि हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर मुल्य प्रतिकित्ता ६ दशमलव ३८ प्रतिशलते घटेर रू. ८८ पुगेको छ ।
प्रतिकित्ता रू. २० ले बढेको शिवम् सिमेण्टको सर्वाधिक कारोबार
दिनभरिको कारोबारमा शिवम् सिमेण्टको सर्वाधिक रू. १२ करोड १३ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. २० ले बढेर ६७५ पुगेको छ । कम्पनीको यस दिन १ लाख ८० हजार ८२९ कित्ता शेयरको कारोबार भएको हो । कम्पनीको २ सय पटक कारोबार भएको छ । दोस्रोमा प्रभु बैंकको रू. ९ करोड ३३ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. २७४ रहेको छ ।